नेपालमै पहिलोपटक लिं’ग परिवर्तन गरेका व्यक्तिको नागरिकतामा पनि लिं’ग संशोधन हुँदै – Khabar Silo
काठमाडौं। नेपालको नागरिकता इतिहासमै पहिलो पटक श’ल्यक्रि’याबाट लिं’ग परिवर्तन गरी पुरुषबाट महिला बनेका व्यक्तिको नागरिकतामा पनि लिं’ग संशोधन गरिने भएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा श’ल्यक्रि’या गरेर लिंग परिवर्तन गरेपछि नागरिकतामा लिं’ग संशोधन भएको थिएन ।
श’ल्यक्रि’यामार्फत महिला बनेका भक्तपुरका एक व्यक्तिको नागरिकतामा पहिले लिंग पुरुष उल्लेख भएकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर महिला बनाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले ती व्यक्तिलाई लिं’ग संशोधन गरी महिलाको रुपमा नागरिकता प्रदान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
भक्तपुरका यी व्यक्ति जन्मँदा पुरुष थिए । उनले पुरुषकै रुपमा नागरिकता लिइसकेका थिए । तर, पछि उनलाई आफ्नो शरीर पुरुषको जस्तो विकसित भएको भए पनि भावनात्मक रुपमा आफू महिला भएको महसुस भएपछि विदेशमा गएर श’ल्यक्रि’यामार्फत लिं’ग परिवर्तन गराएका थिए । लिं’ग परिवर्तन गराएर महिला बनेपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा आफ्नो नागरिकताको लिं’ग संशोधन गरी महिला बनाउन निवेदन दिएकी थिइन् ।
नागरिकतामा लिं’ग संशोधन गर्न निवेदन आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा समस्या पर्यो किनकि अहिलेसम्म कानुनमा नागरिकतामा लिं’ग संशोधन गर्ने व्यवस्था छैन । कानुनी व्यवस्था नभएर समस्या भएपछि जिल्ला प्रशासनले यो विषयमा समस्या समाधान गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । गृह मन्त्रालयले यो समस्यालाई मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याएपछि उनलाई लिं’ग परिवर्तन गरेर नागरिकता दिने निर्णय भएको हो ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार यसरी नागरिकतामा लिं’ग संशोधन गर्न कानुनी बाटो खुलिसकेको भने छैन । उनका अनुसार यो निर्णय बाधा अड्का’उ फुकाउनका लागि मात्र भएको हो र अहिलेका लागि यी एक व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुनेछ । अहिले निवेदन परिसकेकोले त्यो एउटा नागरिकताको समस्या समाधान गर्नको लागि मात्र यो निर्णय भएको हो र यही निर्णयमा टेकेर अहिल्यै अन्य नागरिकतामा लिंग संशोधन गर्न भने कानुनी रुपमा मिल्दैन ।
यद्यपि पछिल्लो समय शल्यक्रिया गरेर लिंग परिवर्तन गर्ने प्रचलन बढ्दै गएपछि नेपालको कानुनमा पनि लिं’ग संशोधन गर्ने बाटो फुकाउन प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको छ । २०७५ को भदौमै नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरिसकिएको छ र यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधिभामा आइसकेको छ ।
यो संशोधन विधेयकमा नागरिकताको लिं’ग संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो संशोधन संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र नागरिकतामा लिं’ग परिवर्तनको बाटो खुल्नेछ । यो संशोधन ला’गू भएपछि भने लिं’ग परिवर्तन गरेको प्रमाणित गर्न पर्याप्त हुने प्रमाणसहित जिल्ला प्रशान कार्यालयमा निवेदन दिएर नागरिकतामा लिंग संशोधन गर्न सकिनेछ काठमाडौं। नेपालको नागरिकता इतिहासमै पहिलो पटक श’ल्यक्रि’याबाट लिंग परिवर्तन गरी पुरुषबाट महिला बनेका व्यक्तिको नागरिकतामा पनि लिंग संशोधन गरिने भएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा शल्यक्रिया गरेर लिं’ग परिवर्तन गरेपछि नागरिकतामा लिं’ग संशोधन भएको थिएन ।
श’ल्यक्रि’यामार्फत महिला बनेका भक्तपुरका एक व्यक्तिको नागरिकतामा पहिले लिं’ग पुरुष उल्लेख भएकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर महिला बनाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले ती व्यक्तिलाई लिं’ग संशोधन गरी महिलाको रुपमा नागरिकता प्रदान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
भक्तपुरका यी व्यक्ति जन्मँदा पुरुष थिए । उनले पुरुषकै रुपमा नागरिकता लिइसकेका थिए । तर, पछि उनलाई आफ्नो शरीर पुरुषको जस्तो विकसित भएको भए पनि भावनात्मक रुपमा आफू महिला भएको महसुस भएपछि विदेशमा गएर शल्यक्रियामार्फत लिं’ग परिवर्तन गराएका थिए । लिं’ग परिवर्तन गराएर महिला बनेपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा आफ्नो नागरिकताको लिं’ग संशोधन गरी महिला बनाउन निवेदन दिएकी थिइन् ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार यसरी नागरिकतामा लिंग संशोधन गर्न कानुनी बाटो खुलिसकेको भने छैन । उनका अनुसार यो निर्णय बाधा अड्का’उ फुकाउनका लागि मात्र भएको हो र अहिलेका लागि यी एक व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुनेछ । अहिले निवेदन परिसकेकोले त्यो एउटा नागरिकताको समस्या समाधान गर्नको लागि मात्र यो निर्णय भएको हो र यही निर्णयमा टेकेर अहिल्यै अन्य नागरिकतामा लिं’ग संशोधन गर्न भने कानुनी रुपमा मिल्दैन ।
यद्यपि पछिल्लो समय श’ल्यक्रि’या गरेर लिं’ग परिवर्तन गर्ने प्रचलन बढ्दै गएपछि नेपालको कानुनमा पनि लिं’ग संशोधन गर्ने बाटो फुका’उन प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको छ । २०७५ को भदौमै नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरिसकिएको छ र यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधिभामा आइसकेको छ ।
यो संशोधन विधेयकमा नागरिकताको लिं’ग संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो संशोधन संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र नागरिकतामा लिंग परिवर्तनको बाटो खुल्नेछ । यो संशोधन लागू भएपछि भने लिं’ग परिवर्तन गरेको प्रमाणित गर्न पर्याप्त हुने प्रमाणसहित जिल्ला प्रशान कार्यालयमा निवेदन दिएर नागरिकतामा लिं’ग संशोधन गर्न सकिनेछ ।
एजेन्सी । आफुले जन्माएर हुर्काएको सन्तानको निधनमा जो कोहि पनि भावबिह्वल हुनु सामान्य कुरा हो । तर आँफुले जन्माएर १९ वर्ष पुगेको छोरोको निधन हुनु र निधन भएको छोरा २ वर्षपछि आउदा जन्मदिने आमालाई कस्तो होला ? प्रसंग हो अमेरिकाको अलास्कामा हालै घटेको एउटा घटनाको । बेकी टर्नी नामक महिलाले आफ्ना छोराको रुपमा छोराकै मुटु […]
मौका पाए गरिबको पनि दिन आउँछ :कुनै बेला आ’र्थिक अभावका का’रण विद्यालय जान नपाएका सचिनले विद्यालयनै टपे ! बधाई।काठमाडौं ।‘असाध्यै पढ्न मन छ तर घरको अबस्था निकै क`मजोर छ त्यसैले पढ्न छाडेर बसेको छु हजुर । कुनै बेला सचिन परियारले आफ्नो अन्तरवा र्तामा आफुले आर्थिक अभाव का कारण बिचैमा पढाई छाड्नु परेको दु:खेसो गरेका थिए […]